Vhidhiyo: Tsvaga Injini Kugadziridza kweKutangisa | Martech Zone
Vhidhiyo: Tsvaga Injini Kugadziridza kweKutanga
Svondo, Ndira 13, 2013 Svondo, Ndira 13, 2013 Douglas Karr
Iwe pakupedzisira wakabvisa kutanga kwako pasi asi hapana munhu anokwanisa kukuwana iwe mune chero mhinduro dzekutsvaga. Sezvo isu tichishanda nekuwanda kwekutanga, iyi inyaya hombe… iyo wachi iri kuneta uye unofanirwa kuwana mari. Kuwanikwa mukutsvaga kwakanyanya kudhura pane kuhaya timu inobuda. Nekudaro, Google haina moyo munyoro kunzvimbo nyowani. Muvhidhiyo iyi, Maile Ohye kubva kuGoogle inokurukura zvaunogona kuita kuti ubatsire.
www - Sarudza kuti unoda here kana kwete domain kutanga ne www kana kwete. Ive neshuwa yekudzoreredza traffic kune iyo yaunosarudza ine 301 (zvachose) redirect.
Webmasters - ita chokwadi kunyoresa yako domeini neGoogle Tsvaga Console Zvishandiso uye uone kana iwe usina kana nyaya newebsite yako.
Alerts - Maile anokurudzirawo kusaina kune Webmaster Alerts kuitira kuti iwe uziviswe pese panenge paine chinetso newebsite yako.
Domain - zvinokurudzirwa kuti iwe utarise kumashure kwesizinda yako kuti uone kuti saiti haina kumbobvira yanetsa usati wasarudza iyo. Spam, malware, zvisina hunhu zvemukati ... chero ipi yenyaya idzi inogona kukuvadza mikana yako yekuverengerwa. Kana paine matambudziko, unogona kuzivisa Google kuburikidza neWebmasters kuti dome racho rave kutarisirwa nemuridzi mutsva.
Tora - mukati meWebmasters, tora mapeji ako kuve nechokwadi chekuti injini dzekutsvaga hadzisi kuzomira mumatambudziko kukamba saiti yako.
bvuma - kana pasina dambudziko, isa peji racho kuGoogle. Kana iwe ukavaka yako saiti ne yakakura zvemukati manejimendi system, iyo CMS ichakuitira izvi pese paunoburitsa zvinyorwa zvitsva kana zvakagadziridzwa.
Analytics - wedzera analytics kune yako saiti kuitira kuti iwe utange kuunganidza akakosha data kubva kune yako saiti - kuve nechokwadi kufambira mberi uye kuita kugadzirisa kubva pamhedzisiro. Kunyangwe iwe ukashandisa kana kwete Google Analytics, ini ndichiri kuishandisa sezvo iine Webmaster, yakabhadharwa yekutsvaga uye yemagariro data ayo ako analytics chikuva hachigone kusanganisira.
patani - gadzira zano rewebhu rinozadzisa zvido zvevashanyi vewebhu uye nekuvaendesa kubhizinesi rako. Kufamba kuri nyore, peji rimwe pazano, uye dhizaini dhizaini inotyaira traffic yakawanda kusvika kwauri.
Kutendeuka - yako webhusaiti inochinja sei tarisiro kuva vatengi kana kutyaira okuwedzera kutengesa kubva kune vatengi varipo? Ive neshuwa yekuve nekushandurwa kunotsanangurwa kune yako saiti - uye kune zviri nani kuyerwa, sanganisira Google Analytics yekutendeuka yekutevera.
Keywords - Injini dzekutsvaga dzinoisa index yako saiti zvirinani kana vachigona kunzwisisa kuti yako saiti nemapeji zviri nezvei. Tora rubatsiro rwehunyanzvi mukutsvaga iwo mazwi akakosha eindasitiri yako uye shandisa mazwi akakosha zvinobudirira mukati mewebsite yako.
havukavu - Ita shuwa yako saiti inokurumidza. Usasarudze yakaderera mutengo muridzi, ivo vari kungoisa yako saiti pane yakagovaniswa, crappy server iyo inokuvadza zvese yako yekutsvagisa injini nekutsungirira kwevashanyi vako.
Inogona kuita SEO Misungo
SEO - kuhaya shady SEO chipangamazano kunogona kukuvadza zvakanyanya pane kunaka kune yako saiti. Bhadhara chipangamazano anonzwisisa uye anoteerera Mitemo yeBasa yeGoogle.
Kudzoka kumashure - Dzivisa zvirongwa zvekubatanidza kana kutenga zvinongedzo kuti uwedzere Pagerank. Iyi inowanzo kuve zano kumakambani eSEO kuvaka yako chinzvimbo. Unovabhadhara kuti vagovane zvisati zvaziviswa zvakatenderedza webhu kuitira kuti vagone kuisa zvinongedzo mune izvo zvirimo.
Zviri nyore - tarisa pane saiti yakapusa iyo inopa ruzivo kune muverengi uye wekushandisa injini yekutsvaga. Saiti dzakaomarara dzinogona kutora nguva yakawanda, kunonoka kuita saiti pasi, uye kuvanza zvemukati zvakakosha zvinotsvaga injini kuti unzwisise zvirimo zvirinani
Kuwanikwa uye kuiswa pachiyero kuchiri kutsamira pakuzivikanwa kwenzvimbo yako. Google haisi kungovimba newe uye kukukanda munzvimbo ye # 1 yemakwikwi, akakosha kiyi kiyi. Kukurudzira yako saiti kwakakosha kuti uwane kuoneka pane injini dzekutsvaga. Ive neshuwa yekuparadzira yako URL mune chero zvinyorwa zvinoburitswa kana zvinyorwa zvakanyorwa nezvesaiti yako. Saina saiti yako kumusoro kuGoogle +, Facebook, LinkedIn, Twitter uye wotanga kushamwaridzana netarisiro yako, vaunoshanda navo, vanokurudzira uye vashandi pamhepo - vachikurudzira zvirimo zvauri kunyora.
Tags: LinksushambadzichinzvimboSearch Engine Optimizationkutsvaga kushambadzira kwekutangaseo yekutangastartups
Unofanira Sei Kutengesa Pamhepo